Google dia afaka nanolotra ny smartwatch voalohany tamin'ny Pixel 4 | Androidsis
Ny fanolorana ny Google Pixel 4 dia efa manana daty ofisialy, ny 15 Oktobra izao araka ny nambaran'ny orinasa tamin'ny fiandohan'ity herinandro ity. Amin'ity hetsika fampisehoana ity dia antenaina fa ho afaka hahafantatra andiana vokatra avy amin'ilay orinasa isika. Ankoatr'ity finday vaovao ity dia afaka mahita vokatra isan-karazany amin'ny orinasa amerikana isika.
Ho fanampin'ireo mpandahateny sasany ao anatin'ny sahan'ny Nest (satria hiantsoana izany ny Home) dia vinavina ho Google izany Handao antsika koa izy amin'ny famantaranandro arifomba amin'ity hetsika ity. Efa ela ny tsaho momba izany, hatramin'ny taon-dasa, saingy toa tamin'ity indray mitoraka ity no aseho azy.
Tamin'ny taon-dasa Google dia nanambola a vola be amin'ny orinasan'ny Fossil. Ka io dia efa hita ho dingana voalohany hanananao smartwatch manokana eny an-tsena. Nanomboka teo dia nisy ny honohono, na dia efa nilaza aza ny orinasa fa tsy hanolotra izany amin'ny taona 2018. Noho izany, ny famelabelarana izao dia toa tsy dia hafahafa.
Mbola tsy manamarina na inona na inona momba ny fisian'ity smartwatch ity ny orinasa. Mistery izany hatreto, saingy azo antoka fa zavatra antenain'ny maro izy io. Ankoatra ny fomba iray omeo fampitomboana fanampiny ny Wear OS, izay mbola tsy mandray sidina araka ny nandrasan'ny maro.
Tombantombana izay efa henontsika nandritra ny volana maro, ka tsy tena fantatsika raha afaka manantena famantaranandro Google isika, na raha ny tsaho miely isan-taona ihany no averimberina amin'ity lafiny ity. Nefa ao anatin'ny iray volana latsaka dia tokony hiala amin'ny fisalasalana isika. Raha tsy milaza zavatra ny firm amin'ity herinandro ity.
Vokatra izay nandrasan'ny mpampiasa maro hatry ny ela.. Tahaka ny nanomezan'ny Pixels zava-baovao eo amin'ny sehatry ny finday avo lenta, maro no manantena fa hamela antsika koa i Google amin'ny famantaranandro mahay manome zava-baovao. Manantena izahay fa betsaka ny ho fantatra ao anatin'ireto herinandro lasa ireto hijerena raha tena marina izany na tsia.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fitaovana Android » SmartWatch » Google dia afaka mampiseho smartwatch eo akaikin'ny Pixel 4